Kedu ihe bụ alụlụ, kedu etu esi akpụ ya yana ihe egwu dị na ya | Netwọk Mgbasa Ozi
E nwere meteorological phenomena dị ka foogu na-eme mgbe igwe ojii dị na ọkwa ala. Neededfọdụ ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị mkpa ka nke a mee. Fog na-ebelata ọhụhụ ma nwee ike ibute ụfọdụ ihe ọghọm. Heard nụla nke ọma na alụlụ.
N’isiokwu a anyị kọwara ihe alụlụ bụ na etu o si emetụta alụlụ. Na mgbakwunye, anyị na-agwa gị njirimara ya na ọnọdụ maka ọzụzụ ya.
2 Ihe mejupụtara na njirimara
3 Ihe egwu nwere ike ibute
Ihe na-eme ka igwe ojii ahụ pụta dị iche iche, ọ bụ ezie na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ na-eme mgbe ụfọdụ ọnọdụ ụfọdụ akọwapụtara. Ọnọdụ mbụ nke a ga-ezute maka alụlụ ahụ bụ kpụ ọkụ n'ọnụ ala nke ala n'abalị. Mgbe ala ahụ jụrụ oyi n'ọtụtụ, oyi akwa nke ikuku dị jụụ na-apụta n'akụkụ dị nso nke ala ahụ. Ọ bụrụ na ikuku na-arụ ọrụ n’akụkụ ala ma na-anọrọ mmiri mmiri, ọ ga-ebute saturation. Ọnọdụ ọzọ maka ọgbụgba ikuku bụ mgbe ikuku dị ọkụ na-agafe ala oyi. O nwekwara ike ime mgbe ikuku na-ekpo ọkụ na-agagharị n'oké osimiri dị oyi karị (yabụ, a na-ahụkarị ya na ebe nwere oghere ice).
Otú ọ dị, alụlụ ahụ na-ezo aka Oge oyi dị ka etymology si dị. N’oge gara aga, alụlụ na-akpọ oge udu mmiri. Nke a agbanweela taa. Ugbu a, a na-eji okwu a na-ezo aka foogu. More kpọmkwem na foogu nke na-eme n'oké osimiri. Dịka anyị kwuburu na mbụ, nke a na-eme mgbe oke ikuku ọkụ na-abịarute iyi mmiri nke dị na okpomoku dị ala. Nke a bụ otu mmiri si ejupụta ma ghọọ vapo mmiri nke ga-eme ka anwụrụ ọkụ.
Ihe na-esi na haze apụta ozugbo bụ na, ịbụ ihe ịtụnanya dị na mbara igwe ebe enwere ọtụtụ mmiri mmiri n'ikuku ikuku jupụtara na ya, na-eme ka visibiliti siri ike. Alụlụ nwere ike ịdị ize ndụ maka ụgbọ mmiri dịka o nwere ike ịkụ ihe. Ọ bụ ezie na ihe egwu a belatara nke ukwuu n'afọ ndị na-adịbeghị anya site na sistemụ GPS eduzi usoro GPS.
Ihe mejupụtara na njirimara
N'ikwu okwu ndị ọzọ gbasara ihu igwe, haze dị ka ụdị alụlụ. Ọ dị iche na onye isi ya n'ogo nke iru mmiri. A ga-ewere ya dị ka anwụrụ ọkụ, ọkwa iru mmiri ga-adarịrị ma ọ bụ karịa karịa 70%. Nke a abụghị otu ihe banyere igwe ojii. Mgbe ụdị foogu a mere, Ebe ọ bụ na enwere oke iru mmiri na gburugburu ebe obibi, visibiliti na-ebelata nke ukwuu na naanị 1 kilomita.
Ihe mejupụtara nke alụlụ bụ hygroscopic nuclei na mmiri. Ọ dị iche na nke ọzọ foogu nkịtị na mmiri mmiri na gburugburu ebe obibi na oku, nke a na-etolite site na akọrọ akọrọ. Hygroscopic nuclei abụghị nanị obere mmiri nke mmiri nnu ma ọ bụ ihe nnu ndị sitere n'oké osimiri na oké osimiri nke ifufe na-ebu. Ihe ndị a na-ejedebe na ikuku ma jupụta na iru mmiri dị na ikuku. Maka saturation ga-eme, a ga-enwerịrị okpomọkụ dị ala karịa nke dị elu.
Ebe ọ bụ na enwere ụfọdụ mgbagwoju anya na usoro ndị a, enwere ọtụtụ ndị na-eji echiche nke alụlụụ, alụlụụ, alụlụ ma ọ bụ ikuku. Na nchịkọta, Fog bu nchikota umu ihe mmiri nke na eme urukpuru na ala di elu ma na eme ka ihu ghara isi ike. N'aka nke ọzọ, echiche ndị ọzọ sitere na foogu. Nke ahụ bụ, ha bụ ụdị foogu dị iche iche dabere na njirimara ha nwere na ọnọdụ ikuku ha etolite.
N’echiche ihe atụ, a pụkwara ịkpọ enweghị nghọta doro anya, ọ bụghị maka eziokwu dị mfe na o kwuwo gbasara ihe gbasara ihu igwe. A na-eji ya asụ asụsụ ahụ ihe isi ike nke igosipụta ma ọ bụ iche echiche nke ọma ma ọ bụ na ị nweghị ike ịhụ otu ihe. Probably nwere ike ịnụ okwu ahụ "Enwere m ike."
Ihe egwu nwere ike ibute
Haze bụ otu n'ime ọnọdụ ihu igwe na mba anyị. Anyị enweghị ike ịgọnahụ nke ahụ, ọ bụ ezie na ọ na-eme ka ọhụụ sie ike, ọ nwere ike inye aka were foto ndị mara mma nke ọdịdị ala. N’ebe ugwu, ala dị larịị na ụfọdụ ndagwurugwu bụ ebe ikuku ndị a na-emekarị. Nke a na-enweghị ịgụta ọnụ, doro anya, na mmiri oke osimiri. Igwe ojii na-agakarị na mpaghara Cantabrian na mpaghara ugwu. Otú ọ dị, ugboro nke ọnụnọ Azores anticyclone n'oge oyi na-enye ohere karịa ụbọchị 80 foogu kwa afọ.
Dịka ọmụmaatụ, na mpaghara Guadalquivir ịda mba anyị na-ahụ ọtụtụ ụbọchị kwa afọ na alụlụụ.
N’ime ihe egwu ndi haze nwere ike inye anyị, ọ kacha emetụta ndị ọkwọ ụgbọala. Ọ bụrụ n’ịga ije na ọhụhụ dị mgbagwoju anya, ị nweghị oke nsogbu ma ọ bụ nsogbu. Ihe na-agbanwe nke ukwuu mgbe ị na-anya ụgbọala. Ọ bụrụ na ịmaghị ịkwọ ụgbọala na ikuku, ọ dị mfe ịnweta ihe ọghọm n'ihi na anaghị eji gị ịkọwa ihe site na obere visibiliti.
Mgbe ị nọ n’ụgbọala, ị zutere ikuku mmiri n’ebe ndị dị n’ụsọ oké osimiri, ọ kacha mma idobe osisi ndị dị ala ka ha wee hụ gị. Ikwesighi itinye ogologo oge n'ihi na ihe ị ga-eme na-eme ka ọnọdụ ka njọ. O doro anya, Kwọ ụgbọala na nwayọ nwayọ ga-ebelata ohere ijikọta ihe. Ọ bụrụ n’ịga n’ihu ma ọ bụ n’azụ gawa ụgbọ ala ọzọ, mee ka ebe nchekwa dịkwuo elu.
Iji wepu mmiri mmiri site na alụlụ ahụ na windo windo, jiri windo windo. O doro anya na ị nụtụla mgbe a na-ekwu "ụtụtụ ụtụtụ, ụtụtụ n'ehihie." Nke a pụtara na igwe ojii ahụ nwere ọdịdị ya kachasị elu n'ụtụtụ ma, ka ala na-ekpo ọkụ site na ọrụ nke anyanwụ, ọ na-ekpochapụ. Ifufe bụ ihe ọzọ nwere ike inye aka wepu anwụrụ ọkụ.
Enwere m olileanya na ozi a enyerela gị aka ịmatakwu banyere haze.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Igirigi
Daalụ maka isonyere anyị n'ụtụtụ a n'ụtụtụ ma mee ka anyị nwekwuo obi abụọ banyere alụlụ ahụ.